Lionel Messi Oo Ku Wargeliyey Coutinho Inuu Ka Shaqeeyo Xaasidnimada Real Madrid Iyo Tababare Ay Ka Hor Istaagayaan Bernabeu | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(11-12-2018) Cayaaryahan Lionel Messi waa ciyaartoyga ugu halista badan ee Real Madrid ka hor tagto, waana cabsi geliyaha halista ku ah ee dhinac u leexiyey dheelli-tirnaanta labada kooxood ee tartamada ay iskaga hor yimaaddaan oo inta badan ay Barcelona guusha qaadato.
Waxa kale oo uu Messi sababay in Barcelona ay tobankii sannadood ee ugu dambeeyey in ka badan kala badh ku guuleysato horyaalka LaLiga, halka Real Madrid ay tobankaas sannadood koobka qaadatay saddex jeer oo kaliya.
Marka laga yimaado garoomada, Lionel Messi waxa uu hadda u jeedsaday inuu caqabad ku noqdo saxeexyada Real Madrid samaynayso, waxaana isaga oo kaashnaya Philippe Coutinho uu doonayaa inuu ka hor istaago inay hesho macallinka reer Germany ee Jurgen Klopp oo ku jiray liiska tababareyaasha uu isha ku hayo Florentino Prez haddii uu fashilmo Solari oo dhawaan shaqada loo dhiibay.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa dalka Spain, Los Blancos waxay hoosta ku haysataa magaca tababare Klopp oo ay wax walba u huri doonaan inuu Real Madrid yimaaddo haddii uu fashilmo Solari, sababtuna waa inay ku qanacsan tahay in dhibaatadeeda uu xallin karo macallin khibrad leh oo kaliya.
Wargeysku waxa uu tilmaamay in Lionel Messi uu la hadlay saaxiibkii Philippe Coutinho oo uu ka dalbaday inuu la hadlo Jurgen Klopp oo ay ka wada shaqeeyeen Liverpool, isla markaana ku qanciyo in aanu imanin Real Madrid.
Warku ma sheegin in Coutinho uu la xidhiidhay Klopp iyo inkale, laakiin waxa la ogyahay in xidhiidh fiican uu u dhexeeyo laacibka reer Brazil iyo tababaraha Liverpool, waana sababta uu Messi u doonayo inuu qanciyo.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa xasiloonida kusoo laabatay intii uu Santiago Solari macallinka u ahaa, waxaanay guuleysteen toddoba ka mid ah siddeedii ciyaarood ee uu shaqada hayey.